Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » USA » Imboni yezokuvakasha yase-US: Kudingeka izinqubomgomo ezintsha ukuze kubuyiselwe isidingo sohambo
Amaphrojekthi weTourism Economics okuthi ngaphandle kwesenzo sombuso esihlosiwe sokusheshisa ukubuya kwebhizinisi nesidingo sokuvakasha samazwe ngamazwe, zombili lezi zigaba ezibalulekile ngeke zilulame ngokugcwele kuze kube okungenani u-2024.
Amalungu emboni yezokuvakasha angaphezu kuka-600—abameli bazo zonke izifundazwe ezingu-50, iSifunda sase-Columbia, iPuerto Rico kanye neGuam—asayine incwadi eya kubuholi bekhongolose enxusa ukuba kuthathwe isinyathelo esisheshayo ngezinqubomgomo zombuso eziseduze zokubuyisela nokukhulisa imboni yezokuvakasha yase-US. Incwadi ilethwe ngabakwa Inhlangano Yezokuvakasha yase-US kubenzi bomthetho.
Le ncwadi inemininingwane yezinyathelo okuhloswe ngazo ukuvuselela imboni yezokuvakasha kwezamabhizinisi asekhaya kanye nezamazwe ngamazwe, eziqhubeka nokuzabalaza ukuze ziphinde zisebenze. Izilinganiso zangaphambili zeTourism Economics zikhomba ukuthi ukusetshenziswa kwemali kwezokuvakasha kwamanye amazwe kube ngama-78% ngaphansi kwamazinga ka-2019 ngo-2021. Ngokufanayo, izindleko zohambo lwasekhaya zazingaphansi kwamazinga ka-50 ngo-2019% ngo-2021.
Amaphrojekthi weTourism Economics ngaphandle kwesenzo sombuso esihlosiwe sokusheshisa ukubuya kwebhizinisi nesidingo sohambo lwamazwe ngamazwe, zombili lezi zigaba ezibalulekile ngeke zilulame kuze kube okungenani ngo-2024. Izinqubomgomo ezilandelayo ziyadingeka ukuze kubuyiselwe imisebenzi elahlekile, ukuvuselela amabhizinisi nemiphakathi, nokuqinisekisa ukululama ngokulinganayo kuyo yonke imikhakha yohambo:
Dlula Ukubuyisela Umkhiqizo USA Act (S. 2424 / HR 4594), edlulisela imali eyizigidi ezingu-$250 yemali eningi engenile evela ku-Travel Promotion Fund ukuze kubuyiselwe isabelomali se-Brand USA futhi kusekelwe imizamo yayo yokubuyisela izivakashi zamazwe ngamazwe kuzo zonke izifunda zase-United States.
Umkhiqizo USAIsabelomali sehla ngo-2021 ngenxa yokwehla okukhulu ezindlekweni zokuvakasha zamazwe ngamazwe ezisetshenziselwa ukuxhasa uhlelo.
Nikeza ngesikhuthazo sentela esihlosiwe ukuze ubuyisele ukusetshenziswa kwemali ekuhambeni kwebhizinisi, ukuzijabulisa okubukhoma, kanye nemicimbi yomuntu siqu.
Izikweletu zesikhashana zentela nezibanjwayo, njengalezo ezihlongozwe eSigabeni 2 no-4 se-Hospitality and Commerce Jobs Recovery Act (S.477/HR1346), zingashukumisa ukusetshenziswa kwemali futhi zisheshise ijubane lokutholwa kohambo lwebhizinisi, izinkomfa, ukuzijabulisa okubukhoma, ezobuciko, imidlalo yeligi emincane, neminye imicimbi yomuntu siqu.
Nikeza imali eyengeziwe yezibonelelo zosizo emabhizinisini okuhamba athinteke kakhulu ngokwandisa ukufaneleka kweSikhwama Sokuvuselela Indawo yokudlela (RRF), Uhlelo Lwesibonelelo Sabasebenzi Bendawo Eshubile, noma ngokusungula uhlelo olusha losizo olunesakhiwo esifana ne-RRF samabhizinisi ancike kwezokuvakasha athikazwe kakhulu imikhawulo ye-COVID-19—okuhlanganisa namahhotela, abahleli bemicimbi, abavakashi beqembu, izindawo ezikhangayo, abeluleki bezokuvakasha nabanye abaningi.
"Njengoba ubhubhane lwe-Covid luqhubeka nokuba nomthelela embonini yezokuvakasha, ukuhlinzeka ngezinqubomgomo ezengeziwe zokusiza kanye nezinqubomgomo zokuzinzisa kuzosiza yonke imikhakha yezokuvakasha ukuthi ilulame," kusho. Inhlangano Yezokuvakasha yase-US IPhini Likamongameli Ophethe Wezindaba Zomphakathi kanye Nenqubomgomo u-Tori Emerson Barnes.
"ICongress kufanele yenze lezi zinto eziza kuqala ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze kubuyelwe ukuhamba kwebhizinisi nemihlangano nemicimbi yobungcweti, ngaphezu kwengxenye yokuvakasha yamazwe ngamazwe."
Brand Covid-19 Ezomnotho Hospitality Policy E-Puerto Rico restaurant Ezokuvakasha